U-Alex Broadbent (ACEPS okanye nomqondisi)
U-Alex nguSolwazi weFilosofi oyiNhloko eyisiphathimandla yeFakhalithi Yezifundo Zobuntu e-UJ.. Ngaphambilini ubephethe izikhundla ezehlukene zokucwaninga, ukufundisa nokuvakasha e-Cambridge, Vienna, Athens nase-Harvard, ngaphambi kokusebenzela iNyuvesi yase-Johannesburg ngowezi-2011. U-Alex uyifilosofa yesayensi enentshisekelo ethize kufilosofi yemfundolwazi, ifilosofi yamakhambi nefilosofi yomthetho okuxhunywe yizindikimba zefilosofi zesisusa, zencazelo nokubikezela. Uzinikele ekutholeni izinkinga zefilosofi ezingqikithini ezisebenzekayo, nasekunikeleni okuthile okunosizo mayelana nazo. Uphethe amazinga e-P avela kuSikhungo Socwaningo Kuzwelonke eNingizimu Afrika (2013-2018) kanti futhi uyilungu le-Sikhungo samaSayensi Entsha eNingizimu Afrika. Useshicilele inqwaba yama-athikili kumajenali aseqophelweni eliphezulu emhlabeni jikelele ngezifundo ezintathu (ifilosofi,ukusatshalaliswa kwamakhambi, nezomthetho). Incwadi yakhe yokuqala, i-Philosophy of Epidemiology, yashicilelwa abakwa-Palgrave Macmillan ngowezi-2013, kanti muva nje seyihunyushelwe olimini lwaseKoriya. Incwadi yakhe yesibili, i-Philosophy for Graduate Students: Metaphysics and Epistemology, yashicilelwa abakwa-Routledge ngoNhlolanja 2016. Okwamanje usahlanganisa incwadi yakhe yesithathu, i-Philosophy of Medicine, ngaphansi kwesivumelwano ne-Oxford University Press.
Iwebhusayithi yemfundo eyaka-Alex
U-Chad ungumfundisi futhi ungumfundi weziqu zobudokotela eSigabeni seFilosofi e-UJ. Ucwaningo lwakhe lumayelana nokuthuthukisa incazelo yefilosofi yenkinga yokungaphumeleli kokufaneleka kwangaphandle kokufunda ngokulinga ezomnotho. Intshisekelo yakhe enkulu inkinga yokungeniswa kweFilosofi yeSayensi.
U-Uskali unguSolwazi weSikhungo semfundo eNyuvesi yase-Helsinki, ongumqondisi we-TINT - Indawo Yobuqabavu kuFilosofi yamaSayensi Okuhlalisana kwabantu. Ngaphambilini, ubenguSolwazi weFilosofi eNyuvesi i-Erasmus yase-Rotterdam e-Netherlands, engumqondisi we-EIPE [Erasmus Institute for Philosophy and Economics]. Wayengumhleli weJenali ye-Economic Methodology (1995-2005), enguSihlalo wokuqala we-International Network for Economic Method. Uphethe izikhundla zokuvakasha emanyuvesi ahlukene futhi okwamanje uphethe isikhundla emabhodini obuhleli bamajenali ayishumi. Ucwaningo lwakhe lukakhulu kufilosofi yamasayensi okuhlalisana kwabantu nezomnotho ikakhulukazi kodwa ngezinye izikhathi lubandakanya ezinye izindawo zesayensi kanye nezindaba jikelele, ezifundweni zesayensi, kufaka nezimpawu zayo zokuhlalisana. Izihloko ezikulolu hlelo zifaka izifanekiso, ubuqiniso besayensi nezimpawu zezifundo zemikhakha ezihambelanayo (njengokubikezela izifiso nempumelelo phakathi kwezifundo; nezindaba zokubandakanyeka kucwaningo olwengeziwe lokugcwaliselwa kwezifundo).
UVeli Mitova (iphini lomqondisi we-ACEPS)
UVeli unguSolwazi osizayo weFilosofi e-UJ. Uthole iziqu Zakhe zobuDokotela e-Cambridge ngowezi-2007. Ngaphambi kokusebenzela Isigaba seFilosofi e-UJ ngowezi-2015, wafundisa waze wacwaninga eNyuvesi i-Rhodes, UNAM (Mexico), neNyuvesi yase-Vienna. Usebenza empambanweni yemfundolwazi, ifilosofi ehlaziyayo nefilosofi yomsebenzi. Usanda kuphothula incwadi yobufakazi bemvelo (Believable Evidence, Cambridge University Press) futhi manje useya emadlelweni aluhlaza emfundolwazi yokungazi nokungabi nobulungiswa nokungakholelwa.
Iwebhusayithi yemfundo kaVeli
UZinhle ungumfundisi eSigabeni seFilosofi eNyuvesi yase-Johannesburg. Ukuthatheka kwakhe ocwaningweni kugabe kufilosofi yamakhambi, ifilosofi yesayensi yezempilo, nefilosofi yobuhlanga. Ucwaningo lwakhe lwe-Honours lwalukusayensi yezempilo kanti ucwaningo lwakhe ku-Master's lwalungezibalo ezisetshenziswa ukubala ukuzalela nesisusa sofuzo. UZinhle ufundisa abangakatholi iziqu kungxenye yefilosofi emayelana nemithetho yokuqala yezinto nemfundolwazi. Ubuye abe umfundi osemusha we-Iris Marion ne-Cornelius Golightly Fellow.
I-imeyili ka Zinhle
UMongane umakadebona nengqalabutho yomzabalazo wase-Afrika; ungumbhali nomfundi wase-Fullbright obuye abe isihlakaniphi sase-Afrika uma ngabe ukuba yisihlakaniphi kusho ukufukamela ingunaphakade nemicabango eqamba kabusha ukunikela kukhwalithi yempilo nomhlaba ohlalekayo kuzo zonke izimo zomhlaba.
ULikhwa uphothule iziqu Zakhe ze-MA kuFilosofi (Ngamalengiso), ngesifundo esinesihloko esithi ‘Hegel’s critical response to scepticism in the Phenomenology of Spirit’. Ungumsizi womcwaningi uSolwazi u-Alex Broadbent (Inhloko eyisiphathimandla izifundo Zoluntu). ULikhwa ubuye asebenze njengomcwaningi enhlanganweni engenzi nzuzo ebizwa nge-iARi, inhlangano ebandakanyeka kuphrojekthi ephenya ngomndeni wase-Afrika njengesikhungo somndeni wase-Afrika (API). ULikhwa unentshisekelo ngokucwaninga iFilosofi yaMakhambi ikakhulukazi yempilo yomphakathi nempambano yaseNtshonalanga nezindlela zase-Afrika zokuxilonga nokwelapha izifo. ULikhwa ufisa ukwenza umsebenzi wosuku weNhlangano yezizwe, Inhlangano Yomhlaba Yezempilo (WHO).